Accueil > Gazetin'ny nosy > Madagasikara: Misy faritany mieritreritra hisitaka
Madagasikara: Misy faritany mieritreritra hisitaka
Mihasarotra andro aman’alina ny raharaha politika eto Madagasikara. Ny fanjakana misy amin’izao fotoana izao dia efa tsy ankatoavin’ny ankamaroan’ny Malagasy intsony. Hita taratra amin’ny fomba fihetsika amin’ny andavan’andro ny olona izany fa indrindra ny fanehoan-kevitra izay mivoaka amin’ny radio isan’andro amin’ireny fandaharana izay ahenoana ny feon’ny mpihaino ireny. Ny ady hevitra politika koa dia ahitana fa miharatsy isan’andro ny fiainan’ny olona, nefa tsy mahita vahaolana amin’izany ny mpitondra. Tsy mifampihaino intsony ny olona entina sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Samy mandeha samy mitady hoy ny hiran’i Jaojoby.
Nanomboka tamin’ny herinandro lasa teo iny dia nandeha ny resaka eny anivon’ny mpanao politika sy ny fiarahamonina fa zava-doza no hitranga amin’ny firenena amin’ny fifidianana amin’ny 2018 hoavy io. Misy mihitsy aza no milaza fa hisy krizy mafimafy kokoa eto amin’ny firenena raha tsy mitandrina ny Malagasy. Porofon’izany ny fanambarana nataon’ny fikambanan’ny eveka eto Madagasikara matetitetika manaitra ny fitondram-panjakana momba ny tsy fandehanan’ny raharaham-pirenena intsony ka tokony hijereny vahaolana maika amin’izany. Indrisy nefa fa toa ny olona miteny an’efitra ireto olon’Andriamanitra ireto fa tsy raharahan’ny fanjakana velively ny fitarainan’izy ireo sy ny fanambarany.
Mbola nanamporofo ny zava-doza mety hitranga amin’ny firenena Malagasy ara-politika koa ny fivoriana izay nataon’ny parlemanta erôpeanina tany Strasbourg any Alemaina tamin’ny herinandro lasa teo. Mampanahy ny parlemantera ao amin’ny vondrona erôpeanina ity ny hisin’ny ny korontana goavana eto Madagasikara.
Irahana mahita fa mihamafy isan’andro isan’andro ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny fanjakana amin’izao fotoana izao. Mandeha ary ny feo ankehitriny fa misy ny faritany mieritreritra hisitaka amin’ny fanjakana Malagasy mihitsy ka hiditra any amin’ny departemanta frantsay. Tena zava-doza raha izany no mitranga. Isany voalaza amin’izany ny faritan’Antsiranana. Mahatsapa tena fa tsy misy azo antenaina intsony ny raharaham-pirenena ataon’ny fanjakana ankehitriny hoy ry zareo ireto. Isan’ny ohatra raisin’izy ireo amin’izany ny mahakasika an’i Nosy Mayotte izay nisitaka tamin’i vondronosy atsy Comores. Misy koa ny maka ohatra amin’ny raharaha any Espagne amin’izao fotoana izao, izay mitaky ny fahalevantenany manokana ny ao Catalogne.
Tonga amin’izany ady hevitra izany ny olona eto Madagasikara ankehitriny ka zava-doza hoan’ny firenena no mitranga raha toa ka misy tokoa izany. Matoa nefa ipetrahan’ny ady hevitra politika amin’izao fotoana izao ity raharaha ity tokony tsy ho hodiana tsy hita.
Amin’ny firenena itrangan’ny olana aram-pitondrana sy fitantanana no itsirian’ny hevitra toa izao lazaina izao. Mihalalina kokoa nefa ny raharaha ankehitriny, ary mampanahy ny hoavin’i Madagasikara. Mafy noho ny ady hevitra mikasika ny federalista tamin’ny taona 1991 izany, ary zava-doza lavitra noho ity rafitra ity raha toa ka tanteraka tokoa.
Isan’ny tompon’antoka amin’izany ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina raha tonga amin’izany isika sanatria. Vokatrin’ny zavamisy tsy mandeha amin’ny laoniny ataon’ny fanjakana amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena izao ady hevitra miforona izao indray. Loza ny mitranga raha toa ka mivaky roa, na telo i Madagasikara. Hisy sanatrian’izany ny fizarana sisin-tany. Tsy maintsy hisy koa ny ady alohan’izany ka lasa hifamono eto isika raha tsy mitandrina. Maro no loza ho vokatr’izany ka tokony ho mailo ny olona rehetra fa indrindra ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana.